Home Wararka RW Rooble ma iska Qaban Doonaa Qaswade Cabdi Cali Raage, inuusan Furfurin...
RW Rooble ma iska Qaban Doonaa Qaswade Cabdi Cali Raage, inuusan Furfurin Xarkihiisa Nabadda?
Cabdi Cali Raage oo ah la taliyaha Farmajo, kana soo jeeda Jubaland wuxuu mar walib la qeybsanayeen Gefefka khariban Farmajo, Kheyre iyo Fahad. Dhoofintii iyo xanuujintii halgamaa Qalbidhagx waxaa uu sacab, af iyo addin ba uu la garab joogay kooxda dembiilayaasha ah ee NN.
Waxaa ka go’onayd Cabdi Cali Raage walina yool u ah sidii Jubaland loo kala daadin lahaa oo ay u noqon lahayd goob dagaal oo aan weligeed dagin. Sidoo kale waa caade qaate khater ku ah qaranka guud ahaan iyo gaar ahaan jubaland, maadaama uu xelligaa adag uu ka shaqeynayo kala daadasho.
Iyadoo la og yahay xumaanta iyo qaska uu Kismayo ula socda ayaa waxay Dowlad-goboleedka Jubaland todobaadkan bilowgiisii ka qaadatay go’aan adag oo dhib badan balse ahaa mid loo baahnaa oo waxay u celisay Cabdi Cali Raage meeshii uu qaska ka soo afuufi jiray oo ahayd Xaruunta NISA oo lagu hayo si loogu diro inuu soo qaniino ciddii Farmajo iyo Fahad ku tiraahda war sidan sax maaha.
Runtii waa ayaandarro in soo celintiisa uu ku tilmaamo kala aragti duwaansho siyaasadeed ee isaga iyo MW Axmed Madoobe oo la og yahay inuu yahay nin Sabar badan oo wax badan xeeriya.
Haddaba ka Soo celintiisa Kismayo waxay dan weyn u tahay:
Reer Jubaland oo qaskiisa ka badbaadaya si loogu halwgalo hawlaha dhibka badan ee doorashada.
RW Rooble oo ka badbaadaya xasarrad in loo abuuro xelligaan uu wax isu doondoonayo, taas oo ah waxa loo diray inuu Cabdi Cali Raage kala hor yimaado dadaallada Socda sida xallinta arrinta Gobolka Gedo.
Reer Gedo oo dadaal ugu jira sidii walaalahood uu degaanka mideeyey ay si caddaalad ah wax ula qabsan lahaayeen si looga gudbo daruuraha cxolaadeed ee dul hoganaya Gobolka Gedo.
Ugu Dambeyn waxay soo celinta dan u tahay Cabdi Cali Raage naftiisa oo laga badbaadiyey inay noloshiisa galaaftaan dadka reer Jubaland ah oo u ciil qaba kana xanaaqsan qoriga dabka leh ee uu kula dhex wareegayo iyo xaalaadda adag oo ay ku jiraan reer Gado.
Isku soo duub Cabdi Cali Raage waxaa uu ahaa ninkii mar waliba lagu fashilinayey wadahalladii iyo dadaalkii doorashada loogu jiray ee uu Farmajo ka qeyb galayey, waxaanu mar waliba Farmajo iyo Fahad kula taliyaa sidii ay u sii dhibtoon lahayd ama u sii adkaan lahayd, taas oo haddaba halkaan ka muuqata.
Runtii waxaa ammaan mudan dowlad goboleedka Jubaland iyo hoggaankeeda oo qaatay tallaabo geesinimo leh oo adag balsa loo baahnaa. Hogaamiyaha wanaagsan waa kan qaadan kara go’aamo adag oo kharaar haddii ay danta umadda ku jirto.
Isku soo xoori RW Rooble ma u sheegi karaa Farmajo inuu joojiyo adeegsiga qaswadayaasha si loo fashiliyo dadaallda badan ee RW Rooble wado.